Bhukha iphakheji yakho yokuhamba eyakhelwe ngokwezifiso kusuka ku-Award Winning Tour Operator ku-Odisha | Ucingo @ + 91-993.702.7574
Namaskaar!... nokubingelela okuvela ezweni leNkosi Jagannath.Bhubaneswar - umuzi wamathempeli; inhloko-dolobha Odisha yizwe lami. U-Odisha, ocebile ngamagugu amasiko, ifa lomklamo kanye namagugu efihliwe kwenzeka njengomoya waseNdiya. Amathempeli amahle, izimpawu zomfanekiso eziyimifanekiso, izikhukhula ezithandekayo, ezithandekayo izilwane zasendle zasendle kanye namapaki kazwelonke, izidalwa ezinamaphiko ezifudukayo echibini laseChilika zivakashela izivakashi eziningi njalo. Ngangifuna ukuveza lobuhle emhlabeni wonke, futhi singomunye we-Award Winning Tour Operator e-Odisha enkonzweni yakho.
Ngangibheke kakhulu kunenkinga yami yobuntwana nezinkinga. Lokhu kwangishukumisela ukuba ngithuthukise le mboni futhi ngiphenye ukufinyeleleka okugcwele kwezinga elingabakhuthaza ngempela i-holidayer noma ukuhlangana kwezivakashi. Futhi singaziqhenya ngokuthi, eminyakeni embalwa, ngemizamo eminingi kanye nokusebenza kanzima manje singumqhubi we-Award Winning Tour operator e-Odisha. Yilokho okushiwo i-"Dream Dream" yami ye-Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd. Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​nokubandakanyeka kulo mboni, nginakho ikhono lokuhlangana iqembu elilungiselelwe kakhulu futhi abasebenzi abanolwazi abazokwazi ukuhamba kahle kakhulu kunesibopho sabo sokunikeza izivakashi zethu ithuba lokuhamba kahle kakhulu.
Namuhla sesisakaze amaphiko ethu siye eNew Delhi naseKolkata futhi sisebenza emazingeni ahlukahlukene e-India ngenhloso enhle ngosizo loMnyango Wezokuvakasha, uHulumeni We-Odisha noHulumeni waseNdiya. Ukuba ngumqhubi we-Award Winning Tour ku-Odisha, i-motto yethu eyinhloko ukuhlinzeka abahambi ithuba lokuphila, ibhokisi eligcwele izinkumbulo nezinobuso obujabulisayo.
Ngalokhu, ngingathanda ukwamukela ukwamukelwa wonke umuntu ukuvakashela isizwe sethu esimangalisayo nesihle futhi sibhekane nobuhle obungapheli. Kuyilindeleke kwangempela ukuthi izivakashi zizozama ukucubungula uphenyo lwezinto ezibukekayo kanye ne-flora fauna yaseNdiya. Ngingathanda ukukuqinisekisa ukuthi okuhlangenwe nakho kwalo kuzohlala isikhathi eside ezinkumbulo zabo esikhathini esidlule.
Yonke engcono kunazo zonke futhi ngilindele ukukwamukela ku-Odisha.